DAAWO Oo Ha Qoslin Qaabkii Uu Cesc Fabregas Muddo 13 Sano Ah Kadib U Qirtay Inu Ahaa Shaqsigii Sir Alex Ferguson Wajiga Kaga Dhuftay Pizza-da. – WWW.Gool24.net
DAAWO Oo Ha Qoslin Qaabkii Uu Cesc Fabregas Muddo 13 Sano Ah Kadib U Qirtay Inu Ahaa Shaqsigii Sir Alex Ferguson Wajiga Kaga Dhuftay Pizza-da.
05/10/2017 Mahamoud Batalaale
Xidiga xulka qaranka Spain iyo kooxda Chelsea ee Cesc Fabregas ayaa muddo 13 sano ah kadib waxa uu qirtay in uu ahaa ciyaartoygii Sir Alex Ferguson wajiga kaga dhuftay cuntada Pizza-da kadib sanado badan oo laysla dhex marayay qofka uu ahaa shaqsigii Sir Alex wajiga ugaga dhuftay Pizza-da. Waxay ahayd October 2004 kii markii ay kooxdii Arsenal ee koobka horyaalka Premier Guuldaro la’aanta ku soo qaaday ay booqatay Old Traffrod isla markaana uu Cesc Fabregas qaybta ka ahaa waxaana kulankan hadheeyay isku dhacyo labada ciyaartoy ahaa.
Manchester United ayaa markaas soo afjartay 49 kulan oo ay Arsenal ku soo jirtay guuldaro la’aan iyada oo markaas dhigtay rekoodhkii taariikhiga ahaa laakiin kulankii Old Traffrod waxaa qasay in ciyaartoyda labada kooxood ay iskugu dhaceen intii ay ku jireen Tunnelka, balse arinta ugu yaabka badan ayaa ahayd in Sir Alex jawiga looga dhuftay Pizza.
Manchester United ayaa guul ku gaadhay 2-0 muran badan dhaliyay iyada oo Wayne Rooney lagu abaal mariyay rekoodhe muran badan keenay laakiin Cesc Fabregas ayaa markan qirtay in uu ahaa shaqsigii Pizza-da wajiga kaga dhuftay Sir Alex laakiin waxa uu beenaale ku tilmaamay xidigii ay Arsenal ka markaas ka wada tirsanaayeen ee Martin Keown kaas oo hore u iftiimayay in uu arkayay in Fabregas uu Pizza-da ku dhuftay Sir Alex.
Markii Fabregas la waydiiyay haddii uu ahaa shaqsigii Sir Alex Pizza-a ku dhuftay ayuu ku jawaabay: “Haa” laakiin waxa uu sharaxaad buuxda ka bixiyay sidii ay wax u dhaceen, dagaalkii labada ciyaartoy dhex maray iyo waliba in aanu si ulakac ah Sir Alex ugu dhufan Pizza-da balse uu raali galin ka bixiyay.
Fabregas ayaa yidhi: “Martin Keown waa beenaale, sababtoo ah waxaan isaga ku arkayay isaga oo hortayda dadka ku feedhaya, sidaa daraadeed isagu waxba muu arkayn. Waxwalba deg deg ayay u dhaceen, waxaan maqlay qaylo, waxaanan ka fikirayay maxaa dhacaya? ”
Fabregas oo ka hadlaya qaabkii uu Sir Alex Pizza-da ugu dhuftay ayaa yidhi: ” Sidaa daraadeed, waxaan la soo baxay Pizza isla markaana waxaan arkay Sol Cambell, Rio Ferdinand, Martin Keown iyo qof walba oo kan kale feedhaya. Waxaan doonayay in aan ku lug lahaado isla markaana maan garnayn halka aan ka bilaabo, waxaan tuuray Pizza-dii kaliya waan tuuray”.
Fabregas oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Markii aan arkay waxay ku dhacaysay sidii qofka aan ku dhufanayay taas oo aanan ula jeedin…. waxaan anigu raali galiyay Sir Alex, xaqiiqdii anigu maan doonayn in aan taas sameeyo”. Wuxuuna markii danbe Fabregas tilmaamay in Sir Alex ay Pizza-du wajiga kaga dhacday.
Haddaba halkan ka daawo qaabka qosolka ahayd ee uu Fabregas u qirtay in uu ahaa shaqsigii Sir Alex wajiga kaga dhuftay Pizza-da iyo sharaxaada qoraalkan aanu idiinku soo gudbinay oo uu muuqaal ahaan ku bixinayo.